Idi China Hydraulic roba hose factory na soplaya |Arex
Ọdọ mmiri hydraulic roba bụ ihe a na-ahụkarị ma dị mkpa na igwe nrụpụta na igwe mkpanaka na-enweghị atụ.Ọ na-arụ ọrụ dị ka pọmpụ nke na-eduga mmiri hydraulic n'etiti tankị, nfuli, valves, cylinders na ihe ndị ọzọ na-enye ike mmiri.Na mgbakwunye, eriri na-adịkarị mfe iji ụzọ na ịwụnye ya, ọ na-amịkọrọ ịma jijiji ma na-ebelata mkpọtụ.Mgbakọ hose-ọkọ nwere njikọ jikọtara na nsọtụ-dị mfe ime.Ma ọ bụrụ na akọwapụtara ya nke ọma ma ghara ime ya nke ọma, ụdọ nwere ike ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu maka ọtụtụ narị puku usoro nrụgide nrụgide.
Ọkpụkpụ hydraulic nwere tube dị n'ime, otu ma ọ bụ karịa n'ígwé nkwado, na mkpuchi mpụta.Ekwesịrị ịhọrọ mpaghara ọ bụla n'uche n'uche.Ụdị arụ ọrụ na arụrụ arụ ọrụ gụnyere nha, okpomọkụ, ụdị mmiri mmiri, ikike ijide nrụgide na gburugburu ebe obibi, ịkpọ aha ole na ole.
Ọkpụkpụ dị n'ime nwere mmiri mmiri ma na-egbochi ya ịpụ n'èzí.Ụdị mmiri mmiri hydraulic n'ozuzu na-ekpebi ihe tube.Na-emekarị, ọ bụ nitrile ma ọ bụ sịntetik roba maka mmanụ hydraulic nke dabeere na mmanụ ala.Ma ihe ndị ọzọ dị ka Viton ma ọ bụ Teflon na-eji mmiri sịntetịt dị ka phosphate ester.
Ihe mkpuchi na-echebe oyi akwa nkwado.Otu ihe a na-eche mgbe ị na-achọpụta ihe mkpuchi bụ iguzogide ọgụ sitere na mmetụta ndị dị n'èzí dị ka kemịkalụ, mmiri nnu, uzuoku, UV radieshon na ozone.Ihe mkpuchi a na-ahụkarị gụnyere nitrile, neoprene na PVC, n'etiti ndị ọzọ.
A na-arụpụta ngwaahịa anyị niile n'okpuru usoro njikwa mma siri ike na-agbaso ọtụtụ ụkpụrụ mba ụwa.N'ihi ya, anyị ekewapụtala hoses hydraulic anyị n'ụkpụrụ ndị a:
Usoro EN 853 na 856:Enwere ike ịhụ hoses hydraulic n'usoro a na nhazi nkwado dị iche iche nke ewepụtara na akwa akwa ma ọ bụ okirikiri dị iche iche.
Usoro SAE 100:Atụlela hoses na usoro SAE 100 dabere na nhazi ha, ihe owuwu, na ọkwa nrụgide.
Nke gara aga: Igwe ikuku
Osote: Igwe mmiri ọgwụ
© Nwebiisinka 20102021: Ikike niile echekwabara.> 50mm roba hose naagbanwe agbanwe Njikọ Mgbasa Ọla Valve mmanụ ihe mmịfe Valve Control Pneumatic Njikọ Mgbasawanye Seismic Ntupu ihuenyo Ngwaahịa niile